CILMI BAARIS: Farqiga dhaqaalaha dabaqadaha oo kor u sii kacaya - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Kerstin Enflo, docent i ekonomisk historia vid Ekonomihögskolan i Lund. Foto: Niklas Zachrisson/Sveriges Radio
CILMI BAARIS: Farqiga dhaqaalaha dabaqadaha oo kor u sii kacaya
Enflo: Lama aamini karo inay ugu wacan tahay siyaasadda dhaqaale ee Sweden
La daabacay onsdag 30 augusti 2017 kl 16.45
Kerstin Enflo, caalimad ku takhasustay culuun taariikhda dhaqaalaha, kana howl-gasha jaamicadda Lund ayaa sheegtay inuu kor u sii kacayo farqiga dhaqaalaha ee dabaqadaha, mar ay isu barbar dhigtay suuqa shaqada afartan sannadood hoortood.
–Waxaa waagaa jiray dabaqado uu dhaqaalahoodu isku dhow yahay. Hase yeeshee laga bilaabo sannadihii siddeetameeyadii uu farqiga dabaqadahuhu kor u kacay, isagoona deg deg iyo lama filaan kor ugu sii kacaya. Waxay middaasi ku xiran tahay dhowr sababood, waa hab caalamka oo dhan, waddammo badan ka jira. Inay ku xiran tahay tallaabooyinka siyaasadda Sweden waa mid ay adag tahay in la rumeeysto. Balse ay ugu wacan tahay dhacdooyinka caalamka iyo adduunkan tuulada noqday iyo teknoloojiyada cusub. Waa kuwo hor-seeda farqiga dhaqaalaha ee kor u sii kacaya, sida ay sheegtay Kerstin Enflo, ahna cilmi baare ku takhasustay culuunta taariikhda dhaqaalaha.
Xannaanada iyo dar-yeelka ma ahan howlo ey mashiinno qaban karaan.
Kerstin Enflo, bare ka howl-gasha jaamicadda Lund.
Kolka ay suuqa shaqada maanta u barbar-dhigto suuqii shaqada ee 40 sannadood hortood, ayay u muuqataa kolka laga yimaado kor u kaca kala duwanaan ee dhanka dhaqaale iney tiro ka yar ka howl-galaan beeraha iyo warshadaha.
–Qiyaastii sannadihii toddobaatameeyadii waxaa nawaaxiga gobolka ay ka tir-san tahay magaalada Kristianstad la oran karaa inuu ahaa beeraley. Wuxuuna ahaa gobolka ugu badan ee laga helo beeraley. Haddiise maanta la eego waxaa muuqata in gobolka Skåne uu yahay mid ka mid ah gobollada ugu wax soo saarka badan ee warshadaha. Soo saarka raashinka waxay isu bedeshay gobol warshaduhu ku badan yihiin magaalada Kristianstad, sida ay sheegtay Kerstin Enflo.
Shaqooyin ka duwan
Inkasta oo weli soo saarka raashinku uu qiime ugu fadhiyo dhaqaalaha ee waqooyi iyo bariga gobolka Skåne, waxaa sidoo kale qabsaday sannadihii ugu dambeeyey shaqooyin kale.
–Howlihii wax soo saarka ayaa lagu wareejiyey waddammada soo koraya ee mushaarkoodu hooseeyo ama noocyada kala duwan ee mashiinnada. Iyada oo maanta inta badan laga shaqeeyo howlaha adeegga, xannaanada iyi dar-yeelka oo aaney mashiinnadu qaban karin. Waxaa kaloo aannu ka shaqeeynaa howlaha wax soo saarka ee ka horreeyey iyo kuwii ka dambeeyey ee xilligii warshadaha, sida tusaale ahaan cilmi-baarista, hor-u-marka, suuq geeynta iyo iibka, sida ay sheegtay Kerstin Enflo.
Howlihii difaaca oo meesha ka baxay
40-kii sannadood ee ugu dambeeyey ayaa la xirey shantii xeryood ee ciidammada qalabka sida ee waqooyiga iyo bariga Skåne, tallaabadaasina oo saameeysay suuqa shaqada. Kuwaasi oo kala ahaa F10 ee magaalada Ängelholm, P2 iyo T4 ee magaalada Hässleholm, P6 iyo A3 ee magaalada Kristianstad.
Sidoo kale waxaa albaabbada loo laabey warshado badan oo saameeyey suuqa shaqada. Tusaale ahaan warshad wayn oo 40 sannadood hortood ka howl-geli jirtay magaalada Kristianstad, shirkadda telefoonnada ee Ericsson. Shirkaddii beeraha ee Kronfågel, Scania, jalaatada Ingman iyo Campbells. Waxay ahaayeen warshadaha kale ee albaabbada loogu laabey nawaaxiga waqooyi iyo bariga Skåne.
Inkasta oo shaqooyinka qaarkood ee wax soo saarka warshadaha ey weli ku sugan yihiin. Waxaa ka mid ah: Scan ee magaalada Kristianstad, Stora Enso ee Nymölla, Ballingslöv ee dibadda magaalada Hässleholm, Ifö ee Bromölla, Absolut ee magaalada Åhus, Tarkett ee Hanaskog, Svenska Pappersbruket ee Klippan, Plastal ee magaalada Simrishamn iyo warshadda soo saarka kiimikada Perstorp ee magaalada Perstorp. Dhammaan warshadahaasi waxey weli ka howl-galaan nawaaxigaa.